Madda Walaabuu Press: ‘Miseensota Raayyaa Ittisaa Ajjeechaa Raawwatanirratti Ragaa Baanus Haga Yoonaa Murteef hin Dhiyaanne’ – Jiraattota Mooyyalee
‘Waan akka malee hamtuut natti Dhagahama, yoggaan akkasitti yaadu dubbachhuuyyuu hin danda’u na hudhayyuu, silaa mootummaan nama bira dhaabachuu qaba ture, namayyuu agarree hin gaafannuyyu.’ Maammud Kannuu
Obbo Diidaa’n waan ijaan arge jedhan kana angawoota waa’ee ajjeechaa kanaa qulqulleefachuu dhufaniif himuu isaanii dubbatu. Angawoonni kunis erga teessoo koo fudhatanii raga dabalataaf si barbaanna naan jedhaniiru jedhu garuu haga yoonaa homaa waanti dhimmi kun fuulduratti deemee jiru hin agarree jedhu.
Ammas jiraattonni magaalattii dabaluun, miseensonni Raayyaa Ittisaa balaa kana geessisan ammayyuu buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa ka Mooyyalee jiru keessa jiru. Haga yoonaas namootni kun murteef dhiyaachuu dhabuun isaaniis namoota warra kana irratti ragaa bahe’ sodaa keessa buuseera. Aadde Amiinaa Mohaammed namoota raga bahanii ‘sodaa keessan jira’ jedhan keessaa isaan tokko; 'namootni kun haga yoonaa murtee tokkoof dhiyaachuu dhabuun nuun nu sodaachiseera'jedhu.